သင်လုပ်ငန်းကို ဒီဂျစ်တယ်စနစ်နဲ့ အသားတကျဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲ - JustLogin
COVID နဲ့ပက်သက်ပြီး လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ လမ်းစတွေ့လာပြီဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ကို စက်မှု တော်လှန်ရေး ၄.၀ ဆီကို တွန်းအားပေးနေသလိုပါပဲ။ အခုအချိန်မှာ ခေတ်စားနေတဲ့ Internet of Things (IoT) လို့ခေါ်တဲ့ Artificial intelligence (AI)၊ Blockchain နဲ့ ဒီလိုနည်းပညာတွေကြောင့်ပဲ revolution တွေက ဖြစ်ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်လာနိုင်တာကတော့ ဒီလိုနည်းပညာတွေက စက်မှုနည်းပညာ ၄.၀ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်အောင် အထောက်အပံ့တွေ ဖြစ်ပေမယ့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာတော့ နည်းပညာပိုင်းမှာ ကမောက်ကမတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လိုအရာတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေ၊ လေ့လာချက်တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးတွေအားလုံးကို ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ နည်းပညာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
COVID နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကင်းရှင်းသွားတဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ တချို့အရာတွေက အရင်လို ပြန်ဖြစ်လာနိုင်မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ဆိုရင်တော့ HR Professional တွေအတွက် ရင်ဆိုင်ရမယ့် အခက်အခဲကြီး အနည်းဆုံး (၃) ခုရှိနေပါပြီ။
Workplace Trend #1 – ရုံးခန်းအရွယ်အစား၊ နေရာအပြင်အဆင်နဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံတွေက အမြဲတမ်း ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးပါပြီ
ဒီလိုကာလ ပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ လုပ်ငန်းခွင်ရဲ့ အဓိကကျတဲ့အပိုင်းတွေကို တနေရာတည်း အထိုင်မထားတော့ဘဲ ရွေ့ပြောင်းလို့လည်း ရတဲ့ ပုံစံနဲ့ ဆက်လက်လည်ပတ်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သတိထားမိစေမယ့်အချက်ကတော့ ရုံးခန်းတွေဟာ အရင်ကထက် ပိုသေးလာနိုင်မှာပါ။ အလုပ်ကိုလာနေတာမျိုးက အပြောင်းအလဲမရှိပေမယ့် ရုံးခန်းအပြင်အဆင် စားပွဲတွေနဲ့ အလှဆင်ထားမှာမျိုးတော့ မဟုတ်လောက်တော့ပါဘူး။ ပြဿနာတွေ အခက်အခဲတွေမရှိဘဲ မြန်ဆန်လွန်းတဲ့ 5G Wireless Network Technology ကလည်း ဒီလိုပြောင်းလဲပြီးတော့ လုပ်ငန်းခွင်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်နိုင်ဖို့ တွန်းအားတစ်ခုလည်း ဖြစ်နေမှာပါ။
လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သေချာစီစစ်ဖို့ အတွက် ပြင်ဆင်နေတာလား? အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အချက်တွေကို ထည့်စဉ်းစားကြည့်ပါ။
Telecoms tools တွေဖြစ်တဲ့ Zoom, Google Handouts, Skype နဲ့ Microsoft’s Teams တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်နိင်စွမ်းတွေကို အရင်လတွေတုန်းက ဖော်ပြပေးခဲ့ပြီးပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံပြီး စကားပြောဖို့ လိုအပ်တယ် ဆိုတာကို သိထားပြီးသားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို Apps တွေအနေနဲ့ အဖွဲ့လိုက်စာတွေပို့လို့ရတဲ့ Platform တွေအဖြစ် ဆက်ရပ်တည်သွားမှာြဖစ်ပြီးတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလည်း ဆက်လက်လိုအပ်နေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြောင်းရွေ့လုပ်ကိုင်လို့ရတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုတာကတော့ အင်တာနက်ကနေလည်း အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပုံ မျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။ Cloud-based Technology တွေခေတ်စားလာပြီးတဲ့နောက် Server တွေအထိုင်ထားပြီး အလုပ်လုပ်စရာ မလိုအပ်တော့ပါဘူး။ JustLogin HR management system လိုမျိုး Cloud-based solutions တွေက ဈေးလည်းသက်သာပြီးတော့ အသုံးပြုရလည်း အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်တွေမရှိဘဲနဲ့တော့ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့ ပစ္စည်းမျိုး သုံးနိုင်ဖို့ကလည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ရုံးတွင်းပိုင်းမှာလည်း Biometric System အဟောင်းတွေအစား Contactless Clock-in system တွေကို အစားထိုး အသုံးပြုဖို့ လိုလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်တွေမှာတော့ တစ်နေရာထဲမှာ အပူချိန်တိုင်းတာတာတွေ၊ မျက်နှာဖတ်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ၊ ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့၊ ရုံးတက်ရက်စစ်ဆေးတာတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုံးမှာမဟုတ်ဘဲ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လည်း real-time visibility ကရုံးတက်တာတွေ တည်နေရာတွေကို ခြေရာခံပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ တစ်ကယ့်မျက်နှာဖတ်စစ်ဆေးတဲ့ နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ သူတို့ တည်နေရာကို ခြေရာခံပေးနိုင်မှာလား?
ပုံမှန် HR လုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ ရုံးပျက်ရက်စီမံတာ နဲ့ လစာတွက်ချက်တာတွေ အတွက်လည်း ဝန်ထမ်းတွေအတွက် တွက်ချက်စီမံပေးနိင်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ရုံးပျက်ရက်တွေကို စီမံပြီးတော့ အချိန်ဇယာားတွေလုပ်ပေးဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး လစာစာရင်းအစအဆုံးကိုလည်း အင်တာနက်ကနေပဲ ဒီဂျစ်တယ်စနစ်နဲ့ ပြုလုပ်စီမံနိုင်ပါတယ်။
Workplace Trend #2 – ဝေးလံတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ နဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ရည်ကို စီမံတိုင်းတာခြင်း
ယနေ့အချိန်ထိ HR Role ဆိုတာ အများအားဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကို လုပ်ကိုင်ရတာ ဖြစ်ပြီးတော့ အင်တာနက်ကနေ လုပ်ကိုင်ဖို့ အတွက်လည်း ပြုလုပ်ပေးရပါတယ်။ အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲဆိုတာကတော့ လူကိုယ်တိုင်သွားစစ်ဆေး စီမံလို့မရတဲ့ နေရာတွေက လုပ်ငန်းခွင်တွေကို စီစစ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်ဆောင်ချက်တွေက HR ကို စနစ်ကျတဲ့လုပ်ငန်းလက်တွဲဖော်တစ်ယောက်အဖြစ် မြင့်တင်ပေးပြီးတော့ solution အသစ်အသစ်တွေကိုလည်း ဖော်ထုတ် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ထမ်းသစ်လေ့ကျင့်ပေးခြင်း – သူတို့ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ လုံးဝရင်းနှီးကြွမ်းဝင်မှု မရှိသေးတဲ့ ဝန်ထမ်းအသစ်တွေ ကို လုပ်ငန်းခွင်မှာ အဆင်ပြေအောင် ဘယ်လိုမျိုးလမ်းညွှန်မှုတွေပေးလဲ?
လေ့ကျင့်ပေးခြင်း – လေ့ကျင့်ပေးတဲ့နေရာမှာ လိုအပ်ချက်တွေကို အဝေးကနေ ဘယ်လိုညွှန်ကြားပေးလဲ?
စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း – ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ပျက်ကွက်မှုအတွက် တာဝန်ယူဖို့ လုပ်ထားလား? ဒီလိုဝန်ထမ်းမျိုးကို သူတို့နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ခွင့်တော့ မပြုထားတော့ပါဘူး။
လေ့လာစီမံစစ်ဆေးချက်များအတွက် အချက်အလက်လုပ်ဆောင်မှု – ဘယ်လို tools တွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို အဝေးကနေ စီစစ်တိုင်းတာပေးနိုင်မလဲ? ဥပမာအနေနဲ့ Cloud-based လုပ်ဆောင်ချက် ဆန်းစစ် ပေးတာမျိုးပါ။ အဝေးကဝန်ထမ်းတွေနဲ့ အဆက်မပြတ် feedback တွေထောက်ပံ့ပေးပြီးတော့ သူတို့လုပ်ငန်း ပြီးဆုံးအောင် ပြုလုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ရုံးတက်တာတွေ ကိုမှတ်ထားပြီးတော့ မဖော်ပြထားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တွေကို စောင့်ကြည့်ပြီး မှတ်သားပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ အချက်အလက်သိမ်းဆည်းထားမှု – အချက်အလက်တွေကို လိုအပ်တဲ့အခါကြည့်နိုင်ပြီးတော့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုံခြုံမှုကိုလည်း ထိန်းထားပေးနိုင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? Cloud-based HR Management system အနေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို စာရွက်စာတမ်းတွေအစား အချိန်အတိုင်းအတာနဲ့ ထိန်းထားပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Workplace Trend #3 – ဝန်ထမ်းတွေအတွက် “သူတို့ကိုယ်ပိုင်အချိန်” နဲ့ “အလုပ်ချိန်” အကြားမြင်သာအောင် ပြုလုပ်ပေးခြင်း
အိမ်ကထွက်လာပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ်ပိုင်နဲ့ အလုပ်ခွင်ဆိုပြီး ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ခွဲခြားပေးမှာပါ။ ဝန်ထမ်းတွေဆီကရရှိတဲ့ Feedback တွေအရ သူတို့အနေနဲ့ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်ဖို့နဲ့ အိမ်ကနေ အလုပ်ကိုသွားရတဲ့အချိန်ကို လျှော့ချပေးဖို့ကို အလိုရှိနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုး HR တွေအတွက် အတော်လေးဝန်လေးစေပါတယ်။
HR တွေအနေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအဆင်ပြေစေဖို့ tools တွေရှာဖွေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးတွေလဲဆိုတော့ နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရတဲ့ သူတွေရဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ ပင်ပန်းစရာတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ သူတို့ပြောတဲ့ အကြောင်းအရာ သေးသေးလေးတွေကို သတိထားကြည့်မိဖို့ပဲ လိုအပ်ပါတယ်။ Toggl, Hubstaff နဲ့ Justlogin တို့လို Time Tracking Tools တွေက ဝန်ထမ်းတွေအတွက် အလုပ်ပိုမလုပ်မိအောင် အကြောင်းအရင်းမရှိဘဲ ခွင့်ပျက်တာ ဖျားနာ တာမျိုး မဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ (နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ Healthtech နဲ့ HRTech နှစ်ခုပါဝင်တာမျိုးတွေ ထွက်ပေါ်လာဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။)
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ HR တွေအနေနဲ့ အထူးသဖြင့် အကျိုးအမြတ်များစေတဲ့လုပ်ငန်း သစ်တွေအတွက် ဝန်ထမ်းတွေကို အတွေ့အကြုံကောင်းတွေရှိဖို့ လေ့ကျင့်ထားပေးသင့်ပါတယ်။ အချိန်ပိုင်းဝန်ထမ်းတွေခန့်အပ်ထားခြင်း နည်းပညာနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ Internet of Things တွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာကြတဲ့ မျိုးဆက်တွေ ဖြစ်နေအောင်လုပ်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမဆို ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ Solution တွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ပြုလုပ်ပါ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ ရေရှည်ထိထိန်းထားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
နောက်အနာဂတ် လုပ်ငန်းတွေဆိုတာကတော့ Cloud-based solution ကိုလိုအပ်ပြီးတော့ မတူညီတဲ့အခြေအနေတွေမှာ ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိပြီးတော့ Hybrid နဲ့ remote worker တွေ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မေးပြီး သုံးသပ်ရမယ့် မေးခွန်းကတော့ – အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? ဆိုတာပါပဲ။